Mampanantena fivoarana i Armenia sy i Azerbaijan tao anatin’ny fihaonan’ireo mpitarika ao Sochi · Global Voices teny Malagasy
Mampanantena hametraka vaomiera roa tonta i Aliyev sy Pashinyan.
Voadika ny 11 Desambra 2021 4:18 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, русский, Español, 日本語, English
Pikantsary avy amin'ny tatitra an-dahatsary ny Euronews
Tamin'ny 26 Novambra, nihaona tao amin'ny tanànan'i Sochi Rosiana ireo mpitarika ao Azerbaijan sy ao Armenia mba hiresaka momba ny fifandraisan'ny roa tonta, tamin'ny fivoriana nokarakarain'ny filoha Rosiana Vladimir Potinina. Natao efa ho tapa-bolana lasa ny fihaonana taorian'ny ady ratsy indrindra nipoaka hatramin'ny ady nifanaovan'ireo repoblika Kaokazy Sovietika taloha roa tamin'ny herintaona, izay nandresen'i Azerbaijan.
Naneho hevitra momba ny fihaonana, nilaza ny filoha Rosiana Vladimir Potinina fa nahatratra fifanarahana momba ireo olana lehibe sasantsasany ireo mpitarika ka tsara ny fihaonana amin'ny ankapobeny.
Tao anatin'ny fanambarana iraisana navoaka taorian'ny fihaonana, nanaiky hanangana vaomiera roatonta momba ny famerana sy ny fanoritana sisintany ny Filoha Azerbaijani Ilham Aliyev sy ny Praiminisitra Armeniana Nikol Pashinyan.
At their Russia-hosted summit in Sochi, leaders of #Azerbaijan and #Armenia agreed to look into possibility to establish a BILATERAL commission that will study issues related to the state border. Not #Russia-mediated as it was discussed before. pic.twitter.com/Vam0bAvj9T
— Olesya Vartanyan (@Olesya_vArt) November 26, 2021
Tamin'ny fihaonana an-tampony nampiantranoin'i Rosia tao Sochi, nanaiky ireo mpitarika ao #Azerbaijan sy #Armenia fa hijery ny mety hisian'ny fananganana vaomiera ROA TONTA izay hanadihady ireo olana mifandraika amin'ny sisintanin'ny fanjakana. Tsy i #Rosia naely tamin'ny fampahalalam-baovao araka ny efa noresahina teo aloha.
Samy nisaotra ny filohan’i Rosia, sy ny fisian’ny mpitandro ny filaminana Rosiana teny an-toerana noho ny asa notanterahana hatramin’ny ady tamin’ny herintaona ireo mpitarika roa ireo.
Nilaza ny filoha Ilham Aliyev tamin'ny fanambarany hoe:
Today we have had a very detailed and I would say sincere talk on all these issues. We openly discussed our plans that cause concern of both parties, and I think the key is that the decisions we made regarding settling arguments and disputes will contribute to making the situation in the South Caucasus safer and more predictable.
Nanana antsipiriany be dia be izahay androany ary lazaiko hoe resaka marina momba ireo olana rehetra ireo. Noresahinay ampahibemaso ny drafitray izay nisian'ny ahiahy teo amin'ny roa tonta, ary mino aho fa ny zava-dehibe dia hanampy amin'ny fanaovana ny toe-draharaha any Kaokazy Atsimo ho azo antoka kokoa sy azo vinavinaina kokoa ny fanapahan-kevitra noraisinay momba ny famahana ny adihevitra sy ny fifandirana.
Nisaotra ny filoha Rosiana ihany koa ny praiminisitra Nikol Pashinyan tamin'ny ezaka hitazomana ny fitoniana ao Nagorno Karabakh, ary nanampy hoe:
I think that if our talks gain momentum based on this meeting, we can expect real results.
Mino aho fa raha mahazo vahana ny resaka ifotoran'ity fihaonana ity, dia afaka manantena vokatra tena izy isika.
Hamafisiko indray ny fahavononan'i Armenia sy ny Governemanta Armenia, izay nahazo ny andraikiny avy amin'ny vahoakan'i Armenia, mba hampiditra ny vanim-potoanan'ny fampandrosoana milamina ho an'ny firenentsika sy ho an'ny faritra misy antsika. Vonona amin'izany izahay ary nanampy mazava tamin'ny fampiharana ity tetika ity ny fivoriana androany.
Hambara amin'ny fiandohan'ny volana Desambra ny lisitr'ireo fanapahan-kevitra noraisina nandritra ny fivoriana, aorian'ny fihaonana eo amin'ny praiminisitra lefitra Rosiana, Armeniana ary Azerbaijanita ao Moskoa.
Fantatra fa hihaona amin'ny 15 Desambra any Bruxelles i Aliyev sy Pashinyan, ao anatin'ny Fihaonamben'ny Fiarahamiasan'ny Vondrona Eoropeana Atsinanana. Araka ny fanambarana an-gazety navoakan’ny Filankevitra Eoropeanina, nanaiky ny “hidinika ny toe-draharaham-paritra sy ny fomba hihoarana ny disadisa hisian'ny Kaokazy Atsimo miroborobo sy marin-toerana, izay tohanan’ny Vondrona Eoropeanina” ireo mpitarika ao Armenia sy Azerbaijan.
Tamin'ny tafatafa niaraka tamin'ny OC Media, nilaza ny mpandinika ara-politika sy talen'ny Foiben'ny Fikarohana Isam-paritra, Richard Giragosian fa “zava-dehibe” ny fivoriana tao Sochi na dia tsy “mamokatra fanoloran-tena mivaingana” aza.
The meeting between the Armenian and Azerbaijani leaders offered an essential return to diplomacy over force of arms.
Nanome vokatra tena ilaina iverenan'ny diplaomasia amin'ny tanjany manoloana herin'ny fitaovam-piadiana ny fihaonana teo amin'ireo mpitarika Armeniana sy Azerbaijani.
Nanantitrantitra ihany koa ny anjara asan'i Rosia ho mpanelanelana amin'ny ady, indrindra mialoha ny fihaonana an-tampony ho avy any Bruxelles i Giragosian. “Niezaka ny hisongona ny Vondrona Eoropeana i Potinina ary nampiasa an'i Sochi mba hanamafisana ny andraikitr'i Rosia amin'ny maha-mpanomboka sy mpampihatra ny fampitsaharana ady napetraky ny Rosiana 2020.”
Azia Atsinanana 1 herinandro izay
Armenia 3 herinandro izay